काठमाडौँ । चिकित्सा क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले आफ्नो १६औ अनसन गरिरहेको र अनसन प्रति सरकारले चासो नदेखाएकोमा पुर्व सहजकर्ताको भूमिका निभाएका योजना आयोगका दुई पुर्व उपाध्यक्ष
डा. केसीलाई काठमाडौँ ल्याइयो, शिक्षण अस्पतालको आइसीयूमा उपचार हुदै
काठमाडौँ । डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ । १६औं पटक अनसनमा बसेका प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो । स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि गएराती उनलाई हेलिकप्टरबाट
डा.केसीलाई सघन उपचार कक्षमा राख्न सुझाव
इलाम । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानबाट आएको विशेषज्ञ टोलीले इलाममा अनशनरत् डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा यहाँ आएको विशेषज्ञ टोलीले डा केसीको स्वास्थ्य
इलाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता योगेश भट्टराईले इलाममा अनशनरत डा गोविन्द केसी कम्युनिष्टको विरुद्धमा लागेको बताएका छन् । प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनले डा गोविन्द